ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေလမ်း ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ဆိုရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးကင်း ဂါထာတော် – 7Day Update News
ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊ လေလမ်း ခရီးသွားလျှင် ရွတ်ဆိုရမည့် အန္တာရာယ်ကင်း ဘေးကင်း ဂါထာတော်
ယနေ့ခေတ်တွင် အတော် ကြောက်စရာကောင်းလာ၏ ။ ခရီးသွားချင် စိတ်တောင် တချို့နေရာတွေ မသွားမလာရဲ အောင် ဖြစ်မိ၏ …။ သတင်းတွေ ကလည် အနိဋ္ဌာ ရုံတွေကသာ များလာသည် ဟိုနေရာဖြင့် ကားတိုက်တာ ဆိုင်ကယ်မှောက် ဟိုနေရာဖြင့် ဓာက်လိုက် စသဖြင့်ပေါ့လေ မကြားချင်လှအဆုံးပါပဲ …။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် မိတ်ဆွေကြီးများကို နိုင်ငံခြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် အဝေးတစ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားလာ လှုပ်ရှားနေသူ ဖြစ်ဖြစ် အန္တာရာယ် ကင်း စေချင်သည် အမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည် …။လူတိုင်း အန္တာရာယ် ကင်းချင် ကြပါသည် မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မှ အန္တာရာယ်မကင်း သူဒုက္ခရောက်ချင်သူလည် ရှိမည် မဟုတ်ပါ …။
ရှေးအခါက. ဆရာအရှင်တိူ့သည် အန္တာရာယ်ကင်း ဂါထာ အမျိူးမျိူးကို ဖွဲ့ခဲ့ကြသည် ထိုထို ဂါထာ များထဲ မှ အောက်ပါဂါထာအား ထုတ်နူတ် ရေးသားလိုက်ပါသည် …။ ” အန္တာရယ် ကင်း ဂါထာတော်
” – ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော ဓမ္မဂုဏောအနန္တော..သံဃဂုဏော အနန္တော မာတာပိတုဂုဏောအနန္တော..အာစရိယဂုဏော အနန္တော ဗုဒ္ဓေါမေသရဏံ..အညံ နတ္ထိ ဓမ္မောမေသရဏံ အညံ နတ္ထိ၊ သံဃောမေ သရဏံ အညံ နတ္ထိ..ဗုဒ္ဓသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဧသာဥတ္တိ ဂစ္ဆအမုမှိ..သြကာသေ တိဋ္ဌာဟိ..
ဂါထာတော်ကြီး အား တနေ့ ၃၇ ခေါက်ထပ် မနည်း နှလုံးသွင်း ရွတ်ဖက်ပါ လေ …။၁၀၈ ခေါက် စသဖြင့် ရွတ်ဖတ်နိုင်သည် ဥပဒ် ကြောင့်ကြမူ ရှိသော် အခေါက်ရေ တိုးရွတ်ပါ …။
ကုနျးလမျး၊ ရလေမျး၊ လလေမျး ခရီးသှားလြှငျ ရှတျဆိုရမညျ့ အန်တာရာယျကငျး ဘေးကငျး ဂါထာတျော
ယနခေ့တျေတှငျ အတျော ကွောကျစရာကောငျးလာ၏ ။ ခရီးသှားခငျြ စိတျတောငျ တခြို့နရောတှေ မသှားမလာရဲ အောငျ ဖွဈမိ၏ …။ သတငျးတှေ ကလညျ အနိဋ်ဌာ ရုံတှကေသာ မြားလာသညျ ဟိုနရောဖွငျ့ ကားတိုကျတာ ဆိုငျကယျမှောကျ ဟိုနရောဖွငျ့ ဓာကျလိုကျ စသဖွငျ့ပေါ့လေ မကွားခငျြလှအဆုံးပါပဲ …။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ကြှနျတျော မိတျဆှကွေီးမြားကို နိုငျငံခွားမှာ ဖွဈဖွဈ အဝေးတဈနရော ဖွဈဖွဈ ခရီးသှားလာ လှုပျရှားနသေူ ဖွဈဖွဈ အန်တာရာယျ ကငျး စခေငျြသညျ အမှနျပငျ ဖွဈပါသညျ …။လူတိုငျး အန်တာရာယျ ကငျးခငျြ ကွပါသညျ မညျသူ တဈဦး တဈယောကျမှ အန်တာရာယျမကငျး သူဒုက်ခရောကျခငျြသူလညျ ရှိမညျ မဟုတျပါ …။
ရှေးအခါက. ဆရာအရှငျတိူ့သညျ အန်တာရာယျကငျး ဂါထာ အမြိူးမြိူးကို ဖှဲ့ခဲ့ကွသညျ ထိုထို ဂါထာ မြားထဲ မှ အောကျပါဂါထာအား ထုတျနူတျ ရေးသားလိုကျပါသညျ …။ ” အန်တာရယျ ကငျး ဂါထာတျော ”
ဗုဒ်ဓဂုဏော အနန်တော ဓမ်မဂုဏောအနန်တော..သံဃဂုဏော အနန်တော မာတာပိတုဂုဏောအနန်တော..အာစရိယဂုဏော အနန်တော ဗုဒ်ဓေါမသေရဏံ..အညံ နတ်ထိ ဓမ်မောမသေရဏံ အညံ နတ်ထိ၊ သံဃောမေ သရဏံ အညံ နတ်ထိ..ဗုဒ်ဓသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ။ ဧသာဥတ်တိ ဂစ်ဆအမုမှိ..သွကာသေ တိဋ်ဌာဟိ..
ဂါထာတျောကွီး အား တနေ့ ၃၇ ခေါကျထပျ မနညျး နှလုံးသှငျး ရှတျဖကျပါ လေ …။၁၀၈ ခေါကျ စသဖွငျ့ ရှတျဖတျနိုငျသညျ ဥပဒျ ကွောငျ့ကွမူ ရှိသျော အခေါကျရေ တိုးရှတျပါ …။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့လို့ နိုဗယ်လ်ဆု ရဖို့ သေချာသွားတဲ့ ပညာရှင်လင်မယား